Sagaal qof oo lagu dilay dhanka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSagaal qof oo lagu dilay dhanka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Sagaal qof oo shacab ah ayaa xalay lagu dilay dhanka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo, sida ay sheegeen ilo-wareedyo.
Lama oga sababta ka dambeysa dilka balse ilo-wareedyo deegaanka ah ayaa sheegaya in dadkaas loo batilmaameedsay hayb ahaan kadib markii isla xalay koonfurta Gaalkacyo lagu dilay sargaal katirsanaa nabadsugida maamulka Galmudug oo magaciisa lagu sheegay Cali Tahliil Cadceed.
Dadka la laayay ayaa kasoo jeeda deegaanada Koonfur-galbeed ee Soomaaliya, ilo-wareedyada ayaa intaas ku daray.
Maxaa keenay dib u dhaca ku yimid doorashada duqa degmada Garoowe?
Garoowe-(Puntland Mirror) Doorashada duqa degmada Garoowe oo qorshuhu ahaa in la qabto horaanta asbuucaan ayaa dib u dhacday, sid ay sheegeen ilo-wareedyo. Dib u dhaca ayaa timid kadib khilaaf weli ka taagan qaar katirsan xubnaha [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weli haysata deegaanka Af Urur ee gobolka Bari, sida ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror. Maleeshiyada ayaa magaalada la wareegtay subaxnimadii hore ee Sabtida kadib [...]